January 2019 - Puntland Mirror Believable Media Website
Madaxweynaha Puntland oo qaabilay qaar katirsan danjirayaasha ajnabiga ah ee ku sugan Soomaaliya
January 31, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa qaar katirsan danjirayaasha ajnabiga ah ee ku sugan Soomaaliya maanta oo Khamiis ah xafiiskiisa ku qaabilay. Safiirada uu madaxweynuhu qaabilay ayaa waxaa kamid ahaa Imaaraadka Carabta, […]
January 30, 2019 Puntland Mirror 0
London-(Puntland Mirror) UK ayaa u dooratay Ben Fender OBE safiir cusub oo u qaabilsan Soomaaliya, sida Xafiiska Arrimaha Dibada UK uu ku sheegay boggiisa Internetka. Ben Fender OBE ayaa badali doona David Concar. Waxaana uu […]
January 29, 2019 Puntland Mirror 0
Berlin-(Puntland Mirror) Soomaaliya waa dalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka, sida ay warbixin sanadeedka 2018-ka ku sheegtay haayada kor-joogtaysa musuqmaasuqa dunida. Warbixin sanadeedka haayada Transparency International oo fadhigeedu yahay magaalada Berlin ay maanta oo Talaado sii […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Talaado ah xafiiskiisa ku qaabilay qunsulka cusub ee Itoobiya. Qunsulka cusub ee Itoobiya u fadhiya Puntland Mabratu Waldo Aragay iyo Madaxweynaha Puntland ayaa ka […]
January 28, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Kulan u dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyada ayaa bisha Maarso ka dhici doona magaalada Garoowe ee caasimada Puntland, sida uu sheegay Madaxweynaha Puntland. “Kulamadaas guud ee madaxda maamulada xubnaha ka ah […]
Al-Shabaab iyo ISIS oo markale ku dagaalamay gobolka Bari
Garoowe-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya labo maleeshiyo oo katirsan Al-Shabaab iyo ISIS ayaa markale ka qarxay gobolka Bari, sida ay sheegeen ilo-wareedyo haayadaha ammaaka ah. Dagaalka cusub ayaa Axadii ka bilaabmay deegaanka buuralayda […]
Garowe-(Puntland Mirror) Heavy fighting between militants from Al-Shabab and ISIS erupted again in Bari region, security sources said. The fresh fighting on Sunday began in the Marshaad Mountainous area near Qandala coastal town, security source […]
Labo Gabey iyo Labo Habeen oo Taariikhda u galay Soomaaliya
January 27, 2019 Puntland Mirror 0
Sanadkii 1960 kii oo ahayd xilligii dalkeena Soomaaliya uu ka xorroobay labadii gumeyste ee kalaa ahaa Talyaani iyo Ingiiriis waxaa dhacday in habeenkii calanka la saarayey ay ahayd amin jaceylka iyo qiimaha xorriyadda ay qabeenkii […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah kulankoodii ugu horeeyay oo toos ah ku yeeshay magaalada Garoowe ee caasimada Puntland tan iyo markii […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay loo qaabtay munaasabad caleemo-saar labo asbuuc kadib markii loo doortay madaxweynenimo. Munaasabada caleemo-saarka oo lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimada Pubtland, ayaa waxaa kasoo qeybgalay […]
Ugu yaraan lix dagaalyahan oo Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqaymo uu Mareykanku ka geystay koonfurta Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa sheegay in ay dileen lix dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab kadib saddex duqaymood oo ka dhan ah Al-Shabaab, Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa bayaan ku sheegay. “Iyadoo lala kaashanayo Dowladda Federaalka Soomaaliya, [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Ammaanka Puntland ee PSF ayaa sii wada howglakooda nadiifinta ah eek a dhanka ah maleeshiyada ISIS kuwaasoo ku dhuumanaya gobolka Bari. Qoraal ay boggooda Facebook-ka soo dhigeen, PSF ayaa sheegtay in ay [...]